हरेक वर्ष अप्रिलको तेस्रो सातामै शेयर बजारले किन लिन्छ गति ? – Taza Post
हरेक वर्ष अप्रिलको तेस्रो सातामै शेयर बजारले किन लिन्छ गति ?
केही दिनदेखि पूँजी बजार बुलिस ट्रेण्डमा गएको छ ने कारोबार रकम पनि एक अर्ब माथिको कारोबार हुन थालेको छ। यस्तो प्रवृत्ति यो वर्ष मात्र भएको हैन, शेयर बजारको इतिहास हेर्ने हो भने पनि हरेक वर्ष अप्रिलको तेस्रो सातामा शेयर बजारमा यस्तो दृश्य देखिँदै आएको पाइन्छ। अब जिज्ञाशा जाग्छ आखिर किन देखिन्छ त यस्तो अवस्था ?
नयाँ वर्ष २०७६ सुरु भएयता नौ कारोबार दिनमै नेप्से १०८ अंकले उकालो लागेको छ। यस अवधिमा ७ अर्ब ६२ करोड बढीको शेयर किनबेच भएको छ भने तीन कारोबार दिनहरु बैशाख ८, ९ र १२ गते एक अर्ब बढीको शेयर किनबेच भयो।
यो समयमा बजार बढ्नुलाई बजार बुलिसतर्फ गई नै हाल्यो भनेर विश्लेषण गर्न विगतको तथ्याङ्कले दिँदैन । तथ्याक अनुसार हरेक वर्षको मध्य अप्रिल पश्चात एक अर्ब माथिको कारोबार गरेको हुने गरेको देखिएको छ । अप्रिल २५, २०१९ मा कारोबार रकम एक अर्ब ३५ करोड देखिँदै गर्दा अप्रील २३, २०१८ मापनि एक अर्ब ५१ करोड माथि शेयर कारोबार भएको देखिन्छ । यसैगरी, २३ अप्रील २०१७ मा पनि एक अर्ब ५३ करोड भन्दामाथि कारोबार भएको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
शेयर बजार वृद्धिमा टेवा पुर्याउने अर्को कारण हो प्रि बजेट छलफलका कार्यक्रमहरु । जसमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता छलफलहरु आयोजना गरि सरोकारवालहरुबाट सुझाब लिने गर्दछन् ।
अगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रि बजेट छलफलका कार्यक्रमहरुमा सरोकारवाला निकायहरुले बजेटमा आफ्नो हितअनुकूलका सुझावहरु दिँदा सोही कार्यक्रमहरु कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन हुने आशा लगानीकर्तामा जाग्दा त्यसको मनोबैज्ञानिक प्रभाव पूँजी बजारमा बजारमा देखिन्छ। जसको कारण स्थिर रहेको बजारले उर्जा प्राप्त गर्दछ र गति लिन्छ ।
यी सबै कारणहरुको संयोग अप्रीलको तेस्रो सातामै मुख्य रुपले पर्ने भएकाले अरु महिनामा निराशाजनक कारोबार भएपनि यो समयमा नेप्से सूचक सँगै कारोबारले पनि अर्ब नाघ्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसबीचमा नेप्से परिसूचकमात्र बढेको छैन दैनिक ५० करोडभन्दा तल कारोबार हुँदै आइरहेको शेयर बजारमा अर्ब बढीको कारोबार हुनु र अझ बिहीबार एक अर्ब ३५ करोड बराबरको कारोबार नाघ्नुले शेयर बजारले बुलिस प्रवृत्ति समातेको सहजै अनुमान लगाउन जो कसैलाई गाह्रो हुँदैन ।(source)
Previous लगानीका आकर्षण १३ वटा लघुवित्तको वित्तीय अबस्था
Next २६ कम्पनीको बजार मूल्य एक बर्षयताकै अधिकतम, कुन कम्पनीको मूल्य कति प्रतिशतले बढ्यो?